TANTARA fahombiazana - World Trade Exchange
ny tantaram-pahombiazan'ny mpanjifantsika
$ 150M INVESTMENT INVESTMENT NORAISANA AVY AMIN'NY ORINASA COFFEE LUCKIN
Ny orinasa Luckin Coffee dia voampanga tato ho ato noho ny fanodikodinam-bola tamin'ny mpampiasa vola tamin'ny alàlan'ny fanodinkodinam-bola ny vola miditra, fandaniana ary ny fatiantoka miasa toa hita fa nahomby kokoa ary nitombo haingana kokoa noho ny teo aloha ary hihaona amin'ny vinavinan'ny orinasa hatramin'ny aprily 2019 hatramin'ny janoary 2020. ny fifanakalozana varotra tao amin'ny NASDAQ hatramin'ny 13 Jolay 2020. Ny tahiry an'i Luckin dia namoy ny 90 isan-jaton'ny sandany, na manodidina ny $ 11 miliara amerikana, teo anelanelan'ny fotoana nitrangan'ny tantara ratsy tamin'ny volana aprily sy ny famongorana azy tamin'ny volana jolay. Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary dia 50 $ teo ho eo ny vidiny. Nihena ambany hatrany amin'ny $ 10 isaky ny anjara izany noho ny tantara ratsy momba ny kaonty tamin'ny volana aprily. Ny iray amin'ireo mpamatsy vola $ 150 tapitrisa an'ny orinasa dia nidina 90 isan-jato hatramin'ny $ 15 tapitrisa. WTE nandoa ny mpanjifa $ 150 tapitrisa, izay ny sandan'ny fampiasam-bolany raha nitatitra izany izy ireo.
INVESTAENT $ 18B natolotra ho an'ny orinasa iray menaka sy GAS.
Ny fihenan'ny vidin'ny solika tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nahatratra ny indostrian'ny solika sy solika. Vokatr'izany, ny fampiasam-bolan'ny mpanjifanay amin'ny orinasan-tsolika sasany dia nilentika 75 isan-jato hatramin'ny $ 4.5 miliara. WTE nanampy ny mpanjifa hamerina $ 18B amin'ny fampiasam-bola rehefa nitatitra izany izy ireo.
INVESTMENT IN AIRLINE EQUITY DEAL RESOVERED OUT A 93% LOSS.
Ny fampiasam-bolan'ny mpanjifa tsy miankina amin'ny fifampiraharahana momba ny zotram-piaramanidina dia nidina 93 isan-jato hatramin'ny $ 1.8 miliara. WTE nandoa ny mpanjifa ny sanda feno amin'ny fampiasam-bolany rehefa nitatitra izany izy ireo.
INVESTASIASA ESTATE REALY NAHASITRAHANA AVY AMIN'NY MAFY 78.9%.
Ny iray amin'ny fampiasam-bolan'ny mpanjifanay amin'ny fananan-tany any ivelany dia mitentina 78.9 isan-jato hatramin'ny $ 500 tapitrisa vao haingana. Ny fihenan'ny ampahefatry ny telovolana dia vokatry ny areti-mifindra coronavirus, izay nanentsina ny fivezivezena ara-bola manerantany. WTE nandoa ny mpanjifa ny sanda feno amin'ny fampiasam-bolany rehefa nitatitra izany izy ireo.
INVESTMENT DOLLAR MULTI-MILIONA NANARAKA AN'NY ORINASA MANUFACTURING
Ny sandan'ny fampiasam-bolan'ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nilatsaka 27 isan-jato tamin'ny telovolana volana jona-jona ary tonga 2.75 miliara dolara amerikana tamin'ny volana jolay sy septambra, nidina 49.7 isan-jato izany tamin'ny taona teo aloha. Nanamarika ny fihenan'ny telo volana nisesy. WTE nandoa ny mpanjifa ny sanda feno amin'ny fampiasam-bolany rehefa nitatitra izany izy ireo.
INVESTMENT PRIVATE IN CRESIT INVESTMENTS NAHASITRANA AVY AMIN'NY fahaverezan'ny 48%.
Ny fampiasam-bolan'ny mpanjifa tsy miankina amin'ny fampanjariam-bola dia nihena 48 isan-jato hatramin'ny $ 2.5 miliara nandritra ny volana Janoary-Novambra 2020. WTE nandoa ny mpanjifa ny sanda feno amin'ny fampiasam-bolany rehefa nitatitra izany izy ireo.
Namidy feno 3 taona mialoha ny hotely.
Orinasa iray momba ny famerenan'ny diloilo dia nahazo $ 2.8 milliards tao amin'ny CREDIT TRADE.
afaka manangona an'arivony tapitrisa dolara ianao ary mandoa trosa amin'ny alàlan'ny wte sehatra!
Ny mpanjifanay, mpamatsy fiara manerantany dia nampiasa ity sehatra ity hanangonana $ 241 tapitrisa ary nandoa trosa 241 tapitrisa dolara.
Orinasa orinasa maro an'isa no nampiasa ity sehatra ity hanangonana $ 2.4 miliara dolara ary handoavana trosa $ 2.4 miliara.
Orinasa misahana ny sehatry ny solika no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana 3.15 miliara dolara ary nandoa trosa 3.15 miliara dolara.
Orinasa biofarmasy iray no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 1.8 miliara dolara ary nandoa trosa $ 1.8 miliara.
Mpanamboatra lozisialy sy rafitra fitehirizam-bokatra no nampiasa ity sehatra ity hanangonana $ 485 tapitrisa.
Orinasa misahana ny fikarohana solika sy gazy voajanahary no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 98 tapitrisa.
Mpanamboatra vokatra indostrialy no nampiasa ity sehatra ity hanangonana 23 tapitrisa dolara ary nandoa trosa 23 tapitrisa dolara.
Orinasa mpanamboatra vy no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 14.8 tapitrisa ary nandoa trosa 14.8 tapitrisa dolara.
Orinasa mpanamboatra vola-strapped no nampiasa an'ity sehatra ity hahazoana $ infusion $ 2.2 miliara hanamafisana ny asany.
Orinasa mpitrandraka solika no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonam-bola hividianana milina fanodinana solika modely ho an'ny solika solika miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 20,000-BPD.
Brian, mpiasan'ny fivarotana lehibe taloha izay mahazo karama farany ambany, dia namorona vola mitentina 12 tapitrisa dolara manokana ary nahazo tombony $ 600,000 tao anatin'ny 72 ora tamin'ny fampiasana an'io sehatra io.
Ireto ny sasany amin'ireo zavatra tsy mampino azonay nanampiana ny sasany tamin'ireo mpanjifanay hanatanteraka ny fampiasana vola manokana amin'ny alàlan'ny WTE sehatra:
Ny mpanjifa iray dia nahazo vola amina miliara dolara tamina trano sy tany nahalafo azy ireo - tsy nisy mihitsy!
Ny mpanjifa iray hafa dia nahazo biraon'ny birao $ 850M, fiaran'ny orinasa, fanontana, kojakoja fananganana, fanaovan-tany, fanaka ao amin'ny birao, ary kojakoja informatika avo lenta, alin'ny hotely, ary sidina fiaramanidina.
Doka fahita amin'ny fahitalavitra iray hafa, doka pirinty, doka ivelany, doka amin'ny Internet, serivisy matihanina, fakan-kevitra, fifandraisana amin'ny daholobe, ary hetsika fifandraisan'ny mpampiasa vola, toerana fanaovana fivoriambe, fitsangantsanganana an-tsambo, fizarana fotoana, fananana fialan-tsasatra ary toerana fitahirizana
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nahazo tombony tombony $ 750,000,000-ampahefatra fanampiny afovoan'ny foibem-bolany anatiny manokana.
Afaka nilaza zavatra betsaka kokoa taminao aho ary nanopy ny masonao… nefa hameno pejy 1000 ity… ary azoko antoka fa azonao ilay hevitra.
Ambaratonga ny kianja filalaovana
NY WTE PLATFORM NO LALANA TOKOA HO AN'NY ZAZA KELY MBA HAMPIANATRA NY LALAM-PIRENENA!
Jennifer dia avy amin'ny asa orinasa mankaleo ho $ 13M amin'ny vola isam-bolana.
Mihaona amin'i Jessica: Vady aman-dreny 5 nahazo $ 7.5 tapitrisa tamin'ny komisiona tao anatin'ny iray volana!
Baldwin dia manana $ 950 Million amin'ny fifampiraharahana ary $ 950,000 amin'ny komisiona natao tamin'ny fifanarahana iray taorian'ny valo andro taorian'ny nananganana ny orinasany.
Vao tsy ela akory izay i Boris dia niasa tamin'ny fifanarahana famatsiam-bola mitentina $ 600 tapitrisa, ary ho valiny dia nanampy azy hitondra vola 12 tapitrisa $.
Randy izao dia mahazo $ 17 tapitrisa isam-bolana.
Damian dia nahazo $ 9.5M tao anatin'ny enim-bolana taorian'ny nanombohany ny asany.
Katherine izao dia mahazo $ 17M isam-bolana amin'ny orinasany Credit.
Robert dia mahazo $ 12.4 tapitrisa isam-bolana amin'ny orinasany Credit.
Jeffrey dia mahazo $ 8.5 tapitrisa isam-bolana amin'ny alàlan'ny orinasany Credit.
Jackson dia nanakaiky ny $ 50,000,000 ary vao nanao izany nandritra ny fito volana.
Nanomboka ity orinasa ity i Brian nefa tsy nisy zavatra niainany teo amin'ny sehatry ny fitantanam-bola. Ankehitriny, mahazo $ 1 tapitrisa isan-kerinandro amin'ny komisiona izy.
Tao anatin'ny iray volana latsaka dia 100 tapitrisa dolara ny fifampiraharahana nataon'i Johnson ary nahazo $ 2.5 tapitrisa tamin'ny komisiona.
13. Peter sy Janet dia nahazo 20 tapitrisa dolara tamin'ny alàlan'ny fifampiraharahana 50 sy fifanakalozana 2 lavitrisa $ efa nakatona!
14. Theodore Powell dia manana $ 750 Million amin'ny fifampiraharahana ary $ 750,000 amin'ny komisiona namboarina valo andro taorian'ny niorenan'ny orinasany.
15. I Luis Allen dia manana $ 100 Tapitrisa fifanarahana ary nahazo $ 3.5 Tapitrisa kaomisiona tao anatin'ny iray volana latsaka.
16. Merlyn Moore nanatontosa $ 70.5 tapitrisa ao anatin'ny roa volana aorian'ity fotoana ity.
17. Nigel Smith dia manana fifanarahana famatsiam-bola $ 600 tapitrisa, izay nanampy azy hahazo $ 12 tapitrisa ho tambiny.
18. Ian Ross dia nanolotra $ 15M tao anatin'ny iray volana nanombohana ity asa ity.
19. Ryleigh Morgan dia nandeha tamin'ny hetsika nandreraka orinasa hatramin'ny $ 12.5M isam-bolana.
20. Arlie Lopez izao dia mahazo $ 17M tsy tapaka amin'ny orinasany Credit.
21. Ariel Parker, amin'izao fotoana izao, dia mahazo $ 12.4 tapitrisa tsy tapaka amin'ny orinasany Credit.
22. Namorona $ 2,575,000 i Sean Anderson tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nanombohany ny asany.
23. Danica Walker izao dia mahazo $ 8.5 tapitrisa amin'ny fomba tsy tapaka amin'ny orinasany Credit.
24. Heinrich Lee dia namokatra $ 15M tao anatin'ny iray volana monja nanombohana ity asa ity.
Tantaran'ny klioba fahombiazana
Orinasa biofarmasiona nampiasaina WTE haminavina ny vola mitentina 3.2 miliara dolara amin'ny vola marina ary namorona $ 3.2 miliara ao anatin'ny 24 ora.
Orinasa orinasa maro an'isa no nampiasa ny Exchange mba haminavina sy hamorona $ 2.85 miliara ao anatin'ny 24 ora.
Orinasa mpanamboatra vy ampiasaina WTE haminavina $ 479 tapitrisa amin'ny fidiram-bola ary hahazo 479 tapitrisa $ ao anatin'ny 24 ora.
Mpanamboatra vokatra indostrialy iray no nampitombo ny fidiram-bolany 2,850% tao anatin'ny 24 ora.
Mpamatsy fiara manerantany dia nampitombo ny fidiram-bola 1,750% tao anatin'ny 24 ora WTE.
Orinasa mpamokatra vy dia nampitombo ny fividianana 150% saingy nampihena ny fandaniam-bola 99%.
Nanamboatra 2,100% tao anatin'ny 24 ora ny mpanamboatra orinasa iray fitehirizana entana.
Nealson Wollaston-joury dia nampitombo ny vola azony tamin'ny 100X ary nahazo fidiram-bola $ 1.2B tao anatin'ny 24 ora nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Roderigo Digel dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 960M amin'ny fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Dame Oden dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 80M ho fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Lewes Hendon dia nampitombo ny vola azony tamin'ny 100X ary nahazo vola mitentina $ 750M tao anatin'ny 24 ora nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Navadik'i Gino Colombo ny vola miditra 12 volana ho $ 720M ho fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Jefferey Callanan dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 60M amin'ny fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Brock Kosslyn dia nampitombo ny fidiram-bolany tamin'ny 100X ary nahazo vola 640M $ ao anatin'ny 24 ora nisoratra anarana amin'ity programa ity.
Micah Whitbeck dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 97M ho fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Art Reheem dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 53M amin'ny fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Antonin Rowe dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 122M amin'ny fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Nathanil Wang dia nanova ny vola miditra 12 volana ho fidiram-bola $ 27M, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Sydney Chevallier dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 360M ho fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Torry Mcelwee dia nanova ny vola miditra 12 volana ho $ 240M amin'ny fidiram-bola, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Charles Rogantin dia nanova ny vola miditra 12 volana ho fidiram-bola $ 93M, ao anatin'ny 24 ora hisoratra anarana amin'ity programa ity.
Josia dia nahazo $ 750 tapitrisa tao anatin'ny 24 ora nisoratra anarana tamin'ity programa ity.
Jackson dia nanakaiky ny $ 250,000,000 tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Nahazo 125 tapitrisa dolara i Brizy tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Nahazo $ 13 tapitrisa i Zakis tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Joan dia nahazo 20 tapitrisa dolara tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Lee Yew dia namokatra $ 15M tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Tantaran'ny klioba fahombiazana - VOL 11-20
TANTARA FAHOMBIA VOL 11
TANTARA FAHOMBIA VOL 20
TANTARA FAHOMBIA VOL 19
TANTARA FAHOMBIA VOL 18
TANTARA FAHOMBIA VOL 17
TANTARA FAHOMBIA VOL 16
TANTARA FAHOMBIA VOL 15
TANTARA FAHOMBIA VOL 14
TANTARA FAHOMBIA VOL 13
TANTARA FAHOMBIA VOL 12
Tantaran'ny klioba fahombiazana - VOL 1-10
TANTARA FAHOMBIA VOL 1
TANTARA FAHOMBIA VOL 9
TANTARA FAHOMBIA VOL 8
TANTARA FAHOMBIA VOL 7
TANTARA FAHOMBIA VOL 6
TANTARA FAHOMBIA VOL 5
TANTARA FAHOMBIA VOL 4
TANTARA FAHOMBIA VOL 3
TANTARA FAHOMBIA VOL 2
TANTARA FAHOMBIA VOL 10
Natao ho an'ity serivisy ity WTE MPIKAMBANA IHANY!
Kitiho eto WTE SOA FIKAMBANANA
Kitiho eto raha hiaraka WTE MPIKAMBANA